Tari-dalana Toriteny Alahady 25 Septambra 2016 (Alahady faha-18 manaraka ny Alahadin’ny Trinité) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Tari-dalana Toriteny Alahady 25 Septambra 2016 (Alahady faha-18 manaraka ny Alahadin’ny Trinité)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika. Indro atolotra anareo indray ny tari-dalana momba ny texte izay ho toriana manerana ny sahan’ny FLM amin’ny Alahady faha 25 Septambra 2016 ho avy izao.
Fanontaniana roa lehibe no mandrafitra ity texte izay anjaratsika ity. Ny voalohany dia ny an’ilay Mpahay Lalàna (νομικός) hoe “Mpampianatra ô, Ny Didy manao ahoana moa no lehibe ao amin’ny Lalàna?” Ny faharoa kosa dia ny fanontanian’i Jesosy tamin’ny Fariseo hoe “Ahoana ny hevitrareo ny amin’i Kristy? Zanak’iza moa Izy?” Miteraka fanontaniana avy amintsika mpamaky ny texte tahaka izao izany: “Inona no hevitra teolojika tian’ny texte ampitaina amintsika?” Inona no ifandraisan’ny valin’ireo fanontaniana roa izay mandrafitra ny texte ireo?
Ny valin’ny fanontaniana voalohany dia ny hoe “Tiava an’i Yahweh Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra” ary “Tiava ny namanao tahaka ny tenanao”. Fehin’ny fizarana roa ao amin’ny Didy Folo ireo (Didy 1–2 sy ny Didy 4–10). Tao amin’ny Testamenta Taloha dia manondro ny etika sy ny mahaizy azy ny Israely amin’ny maha vahoaky ny Faneken’Andriamanitra azy ireo izany. Ny hoe “Tiava an’Yahweh Andriamanitrao…” ohatra dia re teny am-bavany in-droa isan’andro. Raha vakiana ao anatin’ny Teolojian’ny Matio kosa izany dia manondro indrindra ny fiaimpiaina sy ny etika maha vahoaky ny Fanjakan’ny Lanitra izay nentin’i Kristy Jesosy. FITIAVANA roa sosona izay mifamatotra sy tsy azo sarahana izany, dia ny fitiavana mijidina (verticale) izay mampifamatotra ny olona amin’Andriamanitra sy ny fitiavana marindrano (horizontale) izay mampifandray ny samy olombelona. Amin’ny maha fiaimpiaina sy etikan’ny vahoaky ny Fanjakan’ny Lanitra azy dia ny olona izay efa nandray ny ny fitiavan’Andriamanitra no mahay manatanteraka izany. Hoy indrindra manko Jaona Apostoly hoe “Isika tia satria Izy efa tia antsika taloha (1 Jao 4:19)”. Araka ny Efes 2:14–18, ny fampihavanan’Andriamanitra ny olombelona tamin’Izy Tenany teo amin’ny hazofijaliana dia mampihavana ihany koa ny samy olombelona mandray izany. Izany hoe, ny olona mihavana amin’Andriamanitra noho ny hazofijaliana izany dia mihavana amin’ny olombelona tahaka azy ihany koa. Inona no ifandraisan’izany amin’ny valin’ny fanontaniana faharoa?
Ny valin’ny fanontaniana faharoa dia izao: sady “Zanaky Davida (and 42, cf. Mat 1:6–7)” no “Zanak’Andriamanitra (cf. and 44–45; mipetraka eo an-tanana ankavanan’i Yahweh = manana ny voninahitra sy identite maha Zanak’Andriamanitra)” ny Kristy na Mesia izay mitondra izany Fanjakan’ny Lanitra izany. Manamafy sy manazava izany ny fiantsoana Azy hoe “Tompo” eto (Gr. Kurios, Heb. Adonai, anarana izay notononin’ny Jiosy rehefa nifanena tamin’ny anarana hoe Yahweh izy ireo mba ho fanajany ny Didy hoe “Aza manononona foana ny Anaran’Yahweh Andriamanitrao…”): manondro ny identité maha Andriamanitra Azy izany. Sady Olombelona tokoa (Zanaky Davida) no Andriamanitra tokoa (Zanak’Andriamanitra/Tompo) ity Mesia/Kristy izay mitondra ny Fanjakan’ny Lanitra ity. Ny Efes 2:14 dia miantso Azy hoe “ny FIHAVANANTSIKA”, i.e., Kristy amin’ny maha Andriamanitra tokoa sy maha Olona tokoa Azy no fihavanan’ny olombelona amin’Andriamanitra sady fihavanan’ny Olombelona samy Olombelona ihany koa. Amin’ny maha Olona tokoa Azy dia mampiombona ny mino rehetra ao amin’ny Tenany Izy ary amin’ny maha Andriamanitra tokoa Azy dia mampiombona izay efa nampiombonina Taminy amin’Andriamanitra koa Izy (cf. Batisa Kristiana).
Izany olombelona miombona ao amin’i Kristy, izay sady Olombelona tokoa no Andriamanitra tokoa izany, no manana ny mahaizy azy amin’ny maha vahoaky ny Fanjakan’ny Lanitra azy ka afaka mitia an’Andriamanitra amin’ny mahaizy azy rehetra (fo, fanahy, saina) sy mitia ny namany tahaka ny tenany koa. Izay maharitra amin’izany fiombonana amin’i Kristy amin’izany maha izy Azy izany hatramin’nyfarany no hiombom-piainana Aminy mandrakizay koa ao amin’ilay toerana izay efa nambarany fa “namboariny ho Azy sy ny mpanaraka Azy rehetra”. Mahareta amin’izany koa ianao dia ho isan’izay hananana izany identité izany.
Voninahitra anie ho an’Ilay Mpanjakan’ny Lanitra. Amena!